ထိုင်းနိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် Our Skyy ဇာတ်လမ်းတွဲမှ သရုပ်ဆောင် Krist နဲ့ Tayတို့က ထောင်ပေါင်းများစွာသော မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက် လန်းဆန်းပျော်ရွှင်မှုတွေ သယ်ဆောင်လာပေးခဲ့တဲ့ Oishi Green Tea Special Day with Krist & Tay in Myanmar ပွဲ | Popular
October 17, 2019 Asian Fame
Oishi Green Tea က Our Skyy ဇာတ်လမ်းတွဲမှ အမိုက်စားအနုပညာရှင်၂ဦးဖြစ်တဲ့ Krist နဲ့ Tay တို့ကို ပရိသတ်တွေ အနီးကပ်တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ Oishi Green Tea Special Day with Krist & Tay in Myanmar ပွဲနဲ့အတူ အဆုံးစွန်သော ပျော်ရွှင်မှုတွေကို သယ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကိုမမှီလိုက်သူတွေအတွက်လည်း Oishi Green Tea ကလာမယ့်နိုဝင်ဘာ၉ရက်နေ့မှာ Our Skyy fan meeting in Myanmar ပွဲကို ကျင်းပပေးဦးမယ့်အပြင် အဲ့ဒီပွဲမှာ Our Skyy မင်းသားချော၁၀ဦးကို အနီးကပ်တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ VVIP လက်မှတ်တွေလည်း မဲဖောက်ပေးသွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် အသေးစိတ်ကိုသိရှိဖို့ Facebook : OishiDrinkStation ကို အခုပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
Oishi Green Tea, the authentic Japanese Green Tea brought to you the ultimate happiness moment by bringing its hottest actors Krist & Tay from Our Skyy series, for the Oishi Green Tea Special Day with Krist & Tay in Myanmar. For those who missed this moment, Oishi has followed up with Our Skyy fan meeting in Myanmar and Oishi will give VVIP tickets to meet and greet 10 of Our Skyy artists on November 9. Please check facebook : OishiDrinkStation for more details. Enjoy healthy and refreshing moment with Oishi Green Tea to participate online activity.
"DugroကနေDugroSTAR ပြိုင်ပွဲစတင်ကျင်းပတော့မယ့်သတင်းလေးတွေ့လိုက်လို့မေမေတို့သိရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်"